Yakha ipholigoni nge-AutoCAD kunye ne-Excel-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Yakha ipoloni nge-AutoCAD kunye ne-Excel
Yakha ipoloni nge-AutoCAD kunye ne-Excel
Ngesicelo se-alumnus ephosakele iklasi, ndiphendula umbuzo malunga nokwakhiwa kwemigca ye-polygonal kwi-AutoCAD.
Kule meko sineetafile, kwikholamu yokuqala sinezikhululo, okwesibini umgama kwiimitha kunye nekholeta yesithathu iqulethe izifundo.
Ewe, siya kuqhubeka ukwakha i-polygonal, ngoko siya kuqinisekisa impazamo yokuvala kwaye ekugqibeleni siza kuthetha ngeshati yekhosi.
1. Faka iibheringi kunye nemigama ngesandla.
I-nomenclature ukuba iAtuoCAD iyamkela ukuba igresar idatha yinto esaziyo njenge-polar coordination (umgama kunye nokuthwala) kule fom elandelayo:
@ umgama <N / S. bakala d imizuzu ' imizuzwana "E/W
Amaxabiso @, d, ', ” ngamabinzana amagama afunwa yinkqubo ukutolika idatha.
Iimfuno ze-N / S kunye ne-E / W ziza kukhetha enye nganye, njenge-Northeast, i-N ne-E iza kukhethwa
Imilinganiselo yeBold iyedatha yedatha, imizuzwana ingathatha ixabiso lemali.
Ukuba ixabiso liyiyo, linganakwa
Kwimeko, i-sequentially iya kuba ngolu hlobo lulandelayo:
Umgca wolawulo (umgca)
nqakraza kwinqanaba kwesikrini
Nangona esi sichazi magama sesidala, kuba ngoku kukho ii-macros kunye nezicelo ezizodwa zokungenisa idatha, amagqala e-Autocad akhetha ukungena ngale ndlela ngenxa yokuziqhelanisa; ke ndicela unyamezelo lwenu, ngokunyanzelisa ukuqonda iikhonsepthi zokuqala, emva koko uthathe iindlela ezimfutshane. Kananjalo, ukuba bayayazi ukuba siyifunde njani le nto ngaphambi kokuba i-web 2.0 ibekhona, baya kusiqonda isizathu sokuba ndikhethe ukuyabelana ngayo kunokuyigcina esiqwini senkumbulo :).
2. Faka iibheringi kunye nomgama ukusuka kwi-Excel.
Ngaphambili sasibona indlela ukungena kwii-UTM izikhokelo ukusuka ku-Excel, usebenzisa kuphela umsebenzi we-"concatenate", kuba ngeli xesha siya kuzama ukusebenzisa loo msebenzi ofanayo, ngenjongo yokuba iya kusinceda ukwakha itafile yeendlela kunye nemigama.
Ukungancedi kokufaka idatha ngeenyawo kwibar yomyalelo we-AutoCAD, kukwenza impazamo kwixabiso, kwaye uqinisekise ukuba zingeniswe ngokuchanekileyo. Kule meko siza kubona indlela yokusebenzisa i-Excel ukuyifaka kwaye siyikhuphe kwi-AutoCAD, ngaphandle kokusebenzisa i-lisp okanye ii-macros.
Le yileta ye-Excel apho idatha ikhonjiswe khona.
Ngoko ukuba ufaka idatha kwiikholam eziphawulwe ngephuzi, inkqubo ilula lula:
Cofa kwinqanaba kwesikrini
Khetha indawo ephakamileyo ephawulwe ngokuluhlaza, ikopi (ctrl + c)
Cofa kwibha yomyalelo, unamathisele (ctrl + v)
lungile, i-polygon yakho yakhiwe, ukuba ihlala ivulekile okanye idatha ibonakala ingaqhelekanga, uhlola kuphela ixabiso elifakwe kwitheyibhile eliphambili, kwaye wenze inkqubo ngaphandle kokuba uthayiphe ixabiso ngalinye.
3 Qinisekisa impazamo yokuvala
Kule meko, ukuqinisekisile impazamo yokuvala, senza oku kulandelayo:
Sondela kwindawo apho siqale khona, kwaye ulinganise umgama wokuvula phakathi kwendawo yokugqibela kunye nendawo yokuqala. Oku kwenziwa ngomyalelo we "dist", ukuba kule meko ivelisa i-0.20
Ngoku sihlula i-perimeter (isamba semida yonke) phakathi kwaloo mahluko. (1,017.66 / 0.20) = 5,088
Oko kuthetha ukuba ukuchaneka kukunye kuma-5,000, leyo yimitha enye yempazamo kuyo yonke i-5,000 yomgama weemitha. Ukuze wazi ukuba kwamkelekile na, kuya kufuneka uyazi iiparameter ezamkelekileyo kwindawo ohlala kuyo, ngokubanzi ezidolophini zingaphezulu kwe-1 kwayi-3,000 nakwiindawo zasemaphandleni ngaphezulu kwe-1 kwiliwaka.
Ukuba impazamo yokuvala ingaphakathi kweeparamitha, kufuneka sinyanzele ukuvalwa kwepholigoni kwenye yemigca, ngokukhethekileyo kwenye emfutshane, oku kuqinisekisa ukuba impazamo ye-angular esiyifaka kwicala eya kuthi ichaphazele kancinci indawo yendawo. polygon ... ke kuya kufuneka siyilungise le khosi siyilungisileyo.
Ukuba impazamo yokuvala ingaphandle kweeparamitha, qinisekisa ukuba ufake idatha kakuhle, emva koko jonga incwadi yentsimi kwaye ekugqibeleni ... thumela umvavanyi endle 🙁 emva kokumnika isibini secroutons
4.Yakha itafile yeebheringi kunye nemigama
Nesi sihloko siza kubona kwelinye iposi xa sikwenza kunye ne-Civilcad, kuba kulo mzekelo siye sasebenzisa i-Excel ukufaka amanqaku, ngoko ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, sitshintsha nje kwaye sizinamathise itafile ekunene lovimba, eliye lalinganisa le data ukuba yenze kuphela ikopi + yokunamathisela.
Kukhethwa ukusebenzisa unonophelo olukhethekileyo, ukukhetha phakathi kwe-autocad entities, into ye-ole, umfanekiso okanye ibhloko.
Ukubulisa nokukubona ngexesha elizayo
Ngoku kuza inxalenye yemfundo yeWebhu ye-2.0, yiziphi ii-macros okanye izicelo ozisebenzisayo ukufaka itafile enje?
Ukuxhuma i-ArcGIS ngeGoogle Earth
Thumela ifayela elidlulileyo kumhleli (kwi) geofumadas.com ukuhlaziya itemplate.
Kwiingcamango kufuneka kube lula, kunye nomyalelo wokubambisana.
Ndinezakhiwo ze-geological kwithebula le-Excel
uxhumano lwe-xyz lokuhamba kunye nokudibanisa idatha kunye nobude besakhiwo
Ndingenza njani umgca kwi-autocad?
Ingcamango kukuzicwangcisa le nkqubo kwaye akufuneki ukuba udwebe isakhiwo ngasinye.
Sawubona ndineenkcukacha zesakhiwo se-geological kwi-Excel spreadsheet xyz ubude behloko kunye ne-bz Ndifuna ukuyithatha kwi-AutoCAD kwaye andazi ukuba ndingayenza njani.
Kufuneka kubekho umgca osele kwi-AutoCAD
ALCALDIA OJOJONA uthi:
indlela yokwenza ibhokisi yokwakha kwi-autocad
Ricardo Ismael Montecinos Gonzalez uthi:
Asizange sizame iirvebhe. Kuya kubakho ukubonisa ukuba kulula kangakanani ukufaka umyalelo we-arc kwiinkcukacha ezithile.
Ngaba uyayazi indlela yokudweba i-polygon kunye nee-CURVES, enezo kuphela iinkcukacha zolwazi? Ndinexesha elide, iRadio, Intambo kunye neDelta. Ngaphambili, siyabonga!
Kule nqaku sichaza ukuba yenzelwe injongo yokudweba kwi-AutoCAD, ngaphandle kokwenza ulungiso kwicala ngalinye. Ngethuba nje xa kuhambelana nokunyamezela.
Sawu, ndaqonda ukuba ukuba impazamo yokuvala iphakathi kweerameters, kufuneka sibophe ukuvalwa kwe-polygon ngaphandle komnye wemigca, kodwa kubo bonke abo benza ifom okanye indawo ephakanyisiwe.
Ezi zigaba zifuneka ukuba zijongane ngabanye. Kwaninzi kumatshati ekhosi aphawulwe ngokwahlukileyo, negama le-curve, umsakazo kunye nomtya.
Umbuzo wam yinto eyenzekayo xa ipolgoni ineemigca ephilileyo njengoko udweba ijika ngeDADIO ST. I-LC, I-ROPE STRING NOKUFASELWA
Ngaba ubonisa inkqubo yaseMzantsi-South?
Sawubona, ndifuna uncedo, ndine-autocad 2012 kwaye ayivumeli ukuba ndifake iinkcukacha ngokuchanekileyo, diastancia @ 35.57 ndiyamkela kakuhle kodwa xa ndisiya apha:
UJorge Henriquez de la Cruz uthi:
Ndinomdla wokufunda ukugqibelela inkambo kunye nomgama ngokugqithiseleyo ukwenza i-polygon kwi-autocad
UClara E Rincon uthi:
Eli nqaku li luncedo kakhulu, lisinceda siphuthume umsebenzi.
UFran, kufuneka ugqibelele iiseli ukwenzela ukuba ifomathi x, y.
Emva koko sebenzisa umyalelo womgca uze unamathisele iiseli ezithiniweyo.
Kungenzeka ukuba isebenza kodwa ayiwa phantsi kwendawo yakho yokusebenzela.
Uvavanyo kunye nokuqhagamshelana okukhoyo ngaphakathi kwendawo yakho.
zika geographical Converti ukuya UTM, kunye oyi achaphazelekayo usebenzisa i Excel spreadsheet, khuphela Excel kwaye cola UTM lilungelelanise usebenzisa AutoCAD umyalelo _pline na polygonal mna ibonakala. ukuba kungaba engalunganga?
I efakwe Civilcad okulungileyo kumatshini yam ndifuna ukuzoba buyimilo THROUGH wadala ikwindlela yemigca excell, kodwa xa kufikwa ekukhupheleni Cola Cadno olwakha Wanditsala sinamathele iiseli excell nam nindixhase Musa ukwenza umbulelo
Kufuneka uyiguqule UTM, kuba kukho iinkqubo ezahlukeneyo kunye Iikhompyutheni ze Excel ezitshintshela i-geographic coordinates ukuya ku-UTM. Uya kufuna i-Datum yerejista.
Ndiyabulela kakhulu ukuba unceda kumphendula
Ndiya kubaxabisa kakhulu
hello ukuba ndingazinceda na data ngokwamazinga ukuba ndikwazi ukunceda ndabeka AutoCAD ngoko ke ukuba yonke into efana nale EJM: 0 ° 1328.95˝S nobude 78 ° 1933.17˝O
yiyiphi inkqubo owayikhuphelayo
hello data wehla evela kwisikhululo iyonke kwi pc yam AutoCAD kodwa iinkcukacha agglomerates kakhulu kunye namagama zinkulu ngobukhulu yaye andazi indlela yokwenza omnye okanye iinkcukacha njengam.
Makhe sibone, ngamanyathelo:
1. zalisa idatha ephawulwe kwiikholam eziphambi kwekholam "O"
2. Ukhetha idatha kwikholamu "O"
3 Qalisa ikhophi (ctrl + C)
4 Ngo-autoCAD, sebenzisa umyalelo womgca
5 Ucofa kwiskrini ukubonisa indawo yokuqala
6 Usebenze unamathisele (ctrl + v)
7 Unokwenza u-esc ukugqiba umyalelo
omele ukwakha i-polygon yakho, ukuba ungayiboni, sondeza
FERNANDO VASQUEZ uthi:
Ndiyayixabisa ngokwenene ukuba ndivela eHonduras kwaye ndibonisa ukuqhubeka kweprojekthi ngoMvulo
Ndixolise ukuba ndivele ndinetafile njengoko unayo kodwa andiyazi ukuba isebenza njani kwi-intle.
Khangela, ndivula umzobo
Ndibhalela umgca womyalelo
Kodwa andiyazi into endiyikhethayo okanye indlela yokwenza ngayo
Sawubona, inyaniso ndiyazi ukuba ndingayenza njani. Mhlawumbi kukunceda ukuba ubhale ku-Google amagama azimut kwaye udibanise kwaye apho unokufumana uhlobo oluthile lomsebenzi oluthatha kwelinye iphepha.
Molo, okwethutyana elingephi bendikubuza ukuba ungahamba kanjani kwi-autocad, ndikuthumelele i-exel yedatha yetafile kodwa awunakundinceda kuba ubuhamba ... jonga, sele ndinaso isiseko sokudlula, umhlobo wezakhiwo uyandinceda kodwa zimbini iinkcukacha ukuba asazi ukuba siyifumana phi i-azimuth yediphu yokwahlula kunye nokudipha kwezingqengqelo, uyazi ukuphatha inkqubo kwaye enqumleza ngaphandle kwale datha kodwa senza njani ukubandakanya le datha
jonga kwitheyibhile yedatha ayinika yona
az yekhosi: 340
az yokudibanisa kweziqendu: 70
ukutsalwa kweziqendu: 42
kwaye ngoko enye idatha
Ndiyabulela ukuba ku-exel ndayithumele kuwe
Ewe, ndicinga ukuba unokufumana ukuba yeyiphi indlela yophando abasebenzisa ngayo, kubonakala ngathi inhlanganisela ye -ododite kunye nokuhlala okanye uphando lwe-geological strata. Ngaba unayo kwifayile ye-Excel okanye kwi-notebook kuphela?
Ukuba unayo, thumela kwiposi kwaye ndiza kujonga.
kwaye ngoko enye idatha andinayo ingcamango yokuyenza i-polygonal njengoko ndiqalayo
Hayi, kufuneka ndiyenze iipoloni ngedatha elandelayo kwaye andazi ukuba yenziwa njani
-Poligonal kunye neprofayile kwi jpg okanye pdf (ngezinga) kunye nefayile yokudweba yasekuqaleni (kwi-autocad, corel okanye i-canvas)
ukusuka ekuthambekeni komgama az we-az ehamba nge-buza-buzami
yamacandelo ohlu lohlulo
kwaye banike iikholomu zangaphambili ezizalisiweyo
Ndiyinto entsha kwiforum
Lo ngumbuzo wam
Enza uphando isayithi enye indlela kodwa wenza polygonal ngaphambili, kukho impazamo kodwa Allowable ukubuyekeza kuye ngoku njengoko polygonal sele kwinani ukuba kufuneka babuyekezwe njengoko zesamente nentsimbi enkosi
Ndingumdwebi. 2000 ukusebenzisa AutoCAD yokwakha iipolygons e cartografía.Me moya waya crazy xa kwaba pretty Poligono complicado..Con oku kuthetha ukusebenzisa zilungelelanise polar ukungena imigama enzima engile, kude kube bebasa kum sibane; Ndithe ndagqiba nje ukungena kwinqanaba lephepha lokudibanisa, kuba umgca we-polygon wenziwa ngamanqaku e-2 kwindawo (ukuxolela ukubonakala). Emva kokuba iindawo zikhona, into kuphela endiyayenzayo idibanisa ne-polyline kwaye yile nto! Ndiyathemba ukuba uyabancedisa ..
ngamathandabuzo ndiyishiya i-imeyile ukutshintshana iindlela zokudweba:
Ukushicilela ngenye yezinto ezinzima kakhulu kwi-AutoCAD, ngokusemthethweni ndincoma ukuba uzame ukuzitshintsha ngokushicilela ukusuka kumzekelo kwaye kungekhona kwimilo.
Umzobo wakhiwe kwi-1: 1, cinga ukuba iyunithi imitha enye. Isilinganisi sisebukhulu bephepha.
Yakha iphepha lephepha elingu-1: 100, elithetha ukuba isentimitha enye iyakulingana neesentimitha eziyi-100. Ke ukuba iphepha lakho lingu-8.5 ″ x 11 ″ liyiguqule ibe ziisentimitha, oko kuya kuthetha ukuba isakhelo sakho kufuneka silinganise iimitha ezingama-21 ngeemitha ezingama-28, emva koko ususe malunga nezimbini kwicala ngalinye kwimida yomshicileli kwaye uya kuba nephepha elakhiwe ngo-1: 100 .
Ke ukuba umzobo wakho kule sheet okungalungelaniyo, ubukhulu ngayo into, njengokuba kufanelekile, ngokuba umzekelo kabini ubukhulu bekuya kuba 1: 200 kunye 1 isiqingatha ubungakanani kungaba: 50
Emva koko zama ukunyathelisa ukuze uzenzele ngezakhono ezifunekayo ukuqonda ukulingana kokushicilelwa.
Ukuba ekugqibeleni uyakwenza, ngoko ungaziphulaphula intloko yakho kunye nokubeka, okufuna ezinye iindlela zokulinganisa.
Sawubona, ndifuna ukwenza le mibuzo, nangona andiyazi ukuba kule forum ungandinceda kule nkalo.
Yimalunga nendlela yokunika isikali kwimidwebo yokushicilela. zombini ukusuka kumzekelo, ukususela kwi-layout (kunye neembono).
Ngaphambi kokuba ndifune ukubonisa ukungabaza okanye izimvo kule ndaba.
1 Ndandwendwela iindawo ezininzi, iifom, iphepha, njl njl ukubonisana ngale ngongoma kunye kunye neendidi ezahlukeneyo kunye nezimpendulo endizifumene kuzo; kwizicombululo ezilula kwaye ziqondakala kakuhle, kwiimpendulo ezenziwe kakuhle kunye neyinyathelo, kunye nezimpendulo endaweni yokuba kunceda ukudibanisa ngakumbi, njl.
Ngeempendulo ezahlukeneyo kodwa ngesishwankathelo zichaze ngakumbi okanye zingaphantsi: Inkqubo yokulandela ukunika izikali.
Ukuba ufuna ukunika i-1: isikali se-100, qhubela phambili:
1 / 100xp ukuba iiyunithi zokulinganisa umzobo zingaphakathi mm.
I-100 / 100xp ukuba i-cm
1000 / 100xp ukuba zikhona kwi-mt.
Oku kubhaliweyo, okanye ukungaphumeleli, idatha evela kumacandelo ngamnye kwimeko kunye nomlinganiselo okhutshwe ngawo.
Ngaba le ndlela ichanekile?
Inkqubo efanayo ilandelwa nayiphi na inqanaba ofuna ukuyisebenzisa: 1: 25,1: 200,1: 75, njl.
2 Ndiyaqonda ukuba ukushicilelwa komzobo ukubonakala kwisikali okanye kwisikali (ukuba kukho imidwebo emininzi), esiye sazimisela; yonke moya kufuneka sibhalwe kwisikali 1: 1 (in the model), okt kufuneka ukuchaza ngaphambi kokuba umzobo apho iiyunithi ziya onokusebenza noba mm, cm okanye iimitha. oku kuthetha ukuba iyunithi yesilinganiselo esinqumayo ukusebenza kufuneka imele ekuboneni umlinganiselo wangempela wento efunekayo. ex. Ukuba sinetafile kunye nomhlaba we-1 mt. 1 mt. Umzobo owenziwe ngokuxhomekeka kwiyunithi ekhethiweyo yokulinganisa kufuneka yenziwe ngolu hlobo lulandelayo:
- Zoba isikwere esi-1 x 1 ukuba sisebenza kwiimitha.
- Zoba isikwere esiyi-100 x 100 ukuba sisebenza ngeesentimitha.
- Zoba isikwere esiyi-1000 x 1000 ukuba sisebenza kwii-mm.
Ngaba le ngcaciso ichanileyo? Ndiyabuza ngenxa yokuba ndiyazi ukuba i-Autcad isebenza ngokuzenzekelayo nge mm, nangona ungatshintsha loo maqumrhu ofuna ukuyisebenzisa.
3-Ke ukuthandabuza kwam kuvela kwinto yokuba ukuba ndifuna ukusebenza kwi-mts. okanye kuyo nayiphi na enye iyunithi yomlinganiselo, kuyimfuneko ukutshintsha iiyunithi ukuya kwi-mts. okanye isebenza njengoko ichazwa ludweliso lwenkqubo (mm); kwaye kucingelwa ukuba xa uzoba "X" into, imilinganiselo ayinikayo iya kuba ziiyunithi afuna ukuba nazo loo mzobo. (mhlawumbi mt. cm, njl.)
Uthi ngamanye amagama kwaye uthatha nje. itafile ye1 mt x 1 mt
Ukuba ndiyazi ukuba i-Autocad isebenza nge mm. kodwa ndifuna ukudweba kwam.
- Ngaba utshintshe iiyunithi zokulinganisa kumitha? okanye
-Ndiyishiya ngale ndlela kwaye ndiyifake itafile yam enika ii-1 x 1 eyazi ukuba nangona i-Autocad ingaphakathi mm. umzobo endiwenzayo uya kuba m mts?
Ngaba ndiqinisekile ukuba ndiyayiqonda? Ndiyathemba njalo.
4-All of the above ilibeka kuba kwenzeka ukuba imizobo eziliqela ebonisa loo meko, ukuvula ifayile iiyunithi nkqubo mm. kodwa imilinganiselo yemidwebo i-mts. kwaye enye iinqununu zeprogram ziseM mts. kwaye imilinganiselo yomzobo nayo iyakumitha. kodwa xa kunikwa isikali kwi Ubeko umzekelo 1: 50, 1: 75 ndenza njengoko kuchaziwe apha ngasentla (leyo yindlela efumaneka kwiindawo ezahlukeneyo ndibona), kodwa ayikho.
Ubungakanani bombononongo bubangakanani nobukhulu bephepha kwaye kucingwa ukuba xa umzobo sele sele unesidingo efunekayo kufuneka ulungele kwi-viewport kwaye kuvela ukuba mhlawumbi mncinci okanye ushiya ifestile.
Yintoni eyenzekayo kwimeko?
Kaloku, ezi ziyindlela imibuzo ndiziphethe mbandela, ndithemba ukuba akayi kuhamba awukhathazeki, ingakumbi buhlungu kuba wawandisa ixesha ukususwa kakhulu ndiyacinga, ncam koko, ndiyathemba ukuba icace ngokwaneleyo.
Ukuba unokucacisa ukungathandabuzeki okanye ukwazi nge-tuturial, okanye indawo engayiphendula, yayiya kubonga kakhulu inyaniso.
Akuyona ingxaki, siyalungisa
Kuchanekile, i-polygon, ndicinga ukuba kufuneka ukuba nazo zonke izilungelelaniso, ingxaki kukuba ulwazi endibalwayo okanye apho ndingayifumana lonke ulwazi luqulethe uququzelelo lwamacandelo amabini, kwaye Ibanga lemigangatho. njengoko ndithethile.
Nangona kunjalo, ndiyabulela kakhulu impendulo, kuba inokungathandabuzeki ngokuchanekileyo nokuba ungayifaki i-polygon kunye nale datha.
Ngombulelo kakhulu, kwaye ndiyathemba ukuba akunakukukhathaza ukuba ngandlela-thile ndidibana nawe ngenye into.
Makhe sibone ukuba ndiyiqonda:
Unayo i-polygonal, kodwa unomnxibelelwano lwezikhululo zombini (ndicinga ukuba i-polygon inezinto ezininzi)
Awunazo izikhokelo zezinye, imida kuphela.
Hayi, akunakwenzeka ukwakha, uhlala kuzo zonke iinqununu okanye ube neendlela kunye nemizila.
Sawubona, ndifuna ukwenza umbuzo olandelayo, ngaba ungayifaka ipoloni kwi-autocad ukususela nje kwiibhola ezidibeneyo naziphi na izikhululo? kwaye ukuba unokwenza yintoni inqubo yokulandela.
Kuba ingxaki endinayo yile ilandelayo: Kufuneka ndizobe unxaninzi ka-“x” inani lezitishi; kodwa ekuphela kolwazi endinalo ngumzobo omncinci wepolygon exeliweyo enolungelelwaniso "X" kunye no "Y" kwizitishi ezibini zezo zikhululo, kunye nemigama eyahlukahlukeneyo yamacandelo okanye amacandelo azo. Akukho lwazi kwizihloko, i-azimuth okanye nantoni na elolo hlobo.Ke umbuzo ngulo, njengoko benditshilo ekuqaleni, ukuba umzobo unokwenziwa ngolu lwazi nje.
Ndiya kuxabisa kakhulu impendulo.
okanye i-orlando uthi:
Ndiyathemba ukuba undiphendule, jonga kwitheyibhile yokwakha, i-civicad inike yona ngokuthe ngqo, kodwa andinakufumana indlela yokwenza oku ngakumbi, ndiyathemba uncedo lwakho
Andiqondi naahh kumzekelo wakho osweleyo kwi-onnnnnnn ukuba uza kwenza into yenze ngokuchanekileyo….
Uncedo oluhle kakhulu, mbulela kakhulu, undisindise, kuba ndidweba iipoloni zezitishi ze-38, ii-angles okanye ii-vertices kwaye andizange ndikwazi ukuyivala.
Ndandiyifunde yonke ngeenkqubo ezahlukeneyo umzekelo: ukuvalwa ngenyameko, ukuvala okusemgangathweni, njl njl. (kunye nazo zonke iifomula zayo), kodwa oko ndakuyifuna kwakuyisisombululo esona siphumo. nje ngomnye onginike wona.
Ngoko kwakhona ndiyanibulela kakhulu kwaye mhlawumbi kamva ungayichazela ngomzekelo ukuze ibhaliswe, kwaye inokuba luncedo kwabanye abanokungaqiniseki okufanayo njengam.
Ewe, ndiyayiqonda into endiyithandayo, ndihlala eholide kwaye andihambanga izixhobo zam ezinzima. Ndiza kukuchazela yona emoyeni.
Unayo ipoloni ukusuka kwindawo ye-1 ukuya kwi-50. Kwenzeka ukuba phakathi kwe-1 kunye ne-50 uza kuba ne-30 linearentimitha engamaritha, kodwa i-50 kunye ne-1 kufuneka ifane.
Ngoko uqaphela ukuba umgca omfutshane uphakathi kwe-35 kunye ne-36 amanqaku, ngoko uthabathe yonke imigca ukusuka kwi-35 kwindawo eya kwi-50, kwaye ubenze.
Ubahambisa ngaphi? ukususela kwinqanaba le-50 ukuya kwi-1, umyalelo wokuhambisa, indawo yokuvela kwi-50, indawo ekuyo kuyo i-50. Ngale ndlela, i-polygon yakho ivaliwe ekupheleni, kodwa yavulwa kwinqanaba le-35
Ngoko uthabatha ukuphela kwelo nqaku uze uyithumele kwi-35 iphuzu. Kuthetha ukuba utshintshe ikhosi kunye nomgama wecandelo le-35-36, kodwa uqiniseke ukuba uya kuthinteka kangangoko kunokwenzeka ngendawo ekufutshane
Sawubona, unjani? Ndiyayixabisa uncedo lwakho oluxabisekileyo, nangona andifuni ukubonakala nginyameko; kodwa andizange ndiyiqonde ngokupheleleyo inxalenye yokugqibela yenkcazo yakho apho uthi:
1.- "uhambisa icandelo lomgca lonke (ndicinga ukuba uthetha i-polygon yonke) uthatha indawo yokugqibela njengemvelaphi kunye nesiqalo njengendawo yokuya ".
ngokutsho kwesi sibonakaliso uthi uvulo luya kutshintshana kwicandelo elifutshane. kodwa andiyiqondi indlela oku kwenzeka ngayo.
Ukuguqulwa okuthethi kufuneka ukwenze kwi-vertex, ndicinga ukuba uthetha ukuba kukho ikhosi entsha kwecandelo elifutshane?
Ukuba kuninzi ukucaphukisa ndiya kuba nombulelo gqitha ukuba unokucacisa oku kuqinisekisayo.
Ucinga ukuba unokuchazwa ngomzekelo ocacileyo, nceda
Xa i-polygonal evaliweyo (kwi-2D), ekugqibeleni ayikuvali, kukho ithuba lokufumana iimpazamo ezimbini:
Iphutha lenkcenkcesha kunye nelinye iphutha elungileyo. Siqingatha umgca phakathi kwindawo yokuqala kunye yokuqala kusisiphumo ezo iimpazamo. Ekusebenzeni kuya kusoloko kuphosakele kuba engile sithatha endle basoloko elirhangqiweyo, ndiya kuthetha ukuba nangona usebenzisa imizuzwana, ukuba loo engile waba inani iindawo lokugqibela iqela lethu uphando onegunya ukunyanzela ukuba ngeenxa yaye ngenxa yoko, ekupheleni kusoloko kukho mpazamo
Ephantsi siseko eklasini yezobugcisa, le mpazamo kufuneka ifakwe kwakhona phakathi kwamacala onke ngokulinganayo nobukhulu bayo kwaye le nto inomsebenzi wonke omele ukwazi ukuba uthatha incwadi yezolimo. Esoloko iqala ngokunyamezelana, xa senza kwikhompyutha ecacileyo, senze iindlela ezininzi ukuya kuthi loo mpazamo yamkelekile kwaye ngoku uqinisekile ukuba ezinye iindlela zihamba khona ukwenza okanye iinkqubo eziziqhuba ngokuthe ngqo.
Into ethile kukuba ekugqibeleni, i-polygonal epheleleyo iguqulwa kwiimilinganiselo ezincinci kakhulu ukwenzela ukuba impazamo isasazwa phakathi kwazo zonke iigxina ze-polygon.
Into endiyibonisileyo yindlela esebenzayo yokuvala i-polygon, ngokuqwalasela kuqala, ukuba "ukwakhiwa kwakhona" kwe-traverse enokuthi sele ilungisiwe. Yinkqubo yomzobi we-drafti kunomdwebi wepopografi oqikelela ukuba xa uthe wahlula iperimeter yepolygon ngempazamo yomgama iya kukunika umlinganiselo ochanekileyo, oko kukuthi, zonke iimitha ezimbalwa zomgca impazamo yenziwe kwaye ukuba yenziwe kakhulu. engabalulekanga (okanye ngaphakathi kokunyamezela) ungayivala kwigorha.
Icinga ukuba nokuchaneka phakathi yavuma parameters, yintoni oyenzayo kukuchonga kwicala imfutshane, kwaye ushukume yonke imigca kwicandelo othatha njengoko imvelaphi isiphelo ingongoma ndivuka yokuqala kuyo nendawo (ingxenye beso), oku kwenza ngoku yokuvula iye yabangela umgca imfutshane waza waluvala ngendlela nzima alungise ngomnye eziphezulu ze umbuzo omfutshane.
Ndinamathandabuzo: Ukuba unxaninzi otsaliweyo kwitheyibhile yezalathiso kunye nemigama ayivaleki (njengakumzekelo owubonisayo); Kwenzeka njani ukuba ukulungiswa "kwempazamo yokuvala" kwenziwe?, Ukuyenza ivale.
Ndiyenza umbuzo kuba kumzekelo owabelana ngawo, uchaza oko kufuneka ukwenze kodwa kungekhona indlela yokwenza ngayo. Mhlawumbi unokusinceda ngaloo ndlela, kuba ndiqonda ngokucacileyo oko kuya kwenziwa kodwa kungekhona indlela yokwenza ngayo.
Ndifunde kwezinye iiforam (kwaye ngendlela akukhange kucace kakhulu kum ukuba ndenze njani) malunga "nembuyekezo ye-angular" (esetyenziswa kwii-angles zangaphakathi zepolygon) kunye "nembuyekezo yomgca", ukulungisa ukuvala. iimpazamo, kodwa andazi ukuba iyafana na into oyithethayo, ekubeni ukhankanya malunga nokunyanzeliswa kokuvalwa kwepolygon kwenye yemigca yayo kunye nokulungisa ikhosi echaphazelekayo.
Ngamafutshane, ndingathanda ingcaciso ecacileyo kakhulu malunga nendlela yokwenza oku kulungiswa ngayo, ngokuqwalasela ishati yemida kunye nemida.
Ndiyathemba ukuba ndichaze. kwaye ndiyathemba ukuba unokunceda.
Ubuliso obuninzi kakhulu kunye nokuvuyisana ngeminikelo enjalo.
Oku kungenziwa kuphela nge-AutocAD Imephu okanye kwi-Civil 3D. Ndicinga ukuba inguqu eqhelekileyo ye-AutoCAD ayinayo imisebenzi esemqoka enje.
Ngenye imini ndathetha ngokukwenza oko AutoCAD 14 kunye neSoftdesk 8 kanye apho kukho izimvo kukho i-lisp.
emva umzobo buyimilo kunye nolwalathiso nomgama, ndiya kuwubiza ukurhweba uququzelelo zonke iingongoma AutoCAD ukuya Excel okanye nayiphi na inkqubo, ngoko ungahlela ayisondeze ibe ingxelo kwitheyibhile kunokuba igrafu AutoCAD.
Ukuqaphela kweFulanito uthi:
Kulungile kusasa, ndifuna ukwazi ukuba unokundinceda ngolu hlobo lulandelayo:
Ndingathanda ukudlulisa ulwazi oluqulathwe kwiseli ngokugqwesileyo (umz. Abc), ngqo kumgca wokuyalela we-autoCAD. Lumka ngaphandle kwemfuneko yeCtrl + C kunye neCtrl + V… Oko kukuthi, umbutho weseli uzenzekelayo kwaye i-AutoCAD iyazi ukuba ulwazi olo luthunyelwe ngqo kwilayini yomyalelo we-AutoCAD. Ngaphandle kokuqhubela phambili ulinde uncedo olukhawulezileyo oluvela kuwe, uthi ndlela-ntle
Atte. Ukuqaphela kweFulanito
Ndiqalise umsebenzi wokwakha ipholigoni ukusuka kwitafile eyenziwe kwi-Excel, kuye kwafuneka nditshintshe kuphela ii-commas zenqaku kunye no-W we-O ..., kwaye yaphuma ilungile, ndaye ndaziqhelanisa namanqaku okanye izilungelelaniso kwi-autocad, yaphuma igqibelele ... enkosi kakhulu ngegalelo lakho
Izibingelelo ezivela eParaguay
bangaphezulu .. bawelele ngaphaya .. .. bandincede kakhulu
Okokuqala zama ukwenza ipolgoni enomzekelo, kwaye ndixelele ukuba ufumana okufanayo
Unyanisile, akukho kholamu eluhlaza. Kuya kufuneka ukope umxholo wekholamu "O" xa sele uvule inqaku lomyalelo, kwaye unikeze inqaku lokuqala lemvelaphi ngemouse.
hey endisebenza nawo AutoCAD 2006, yaye xa Ndikhuphela kwaye data cola kwitafile Excel NdinguMenzi yepholigoni kodwa imigca bayaphuma ukuze, kunye q nto ubona q kubonakala buyimilo, ndiza ukwenza into engalunganga ukuba siqale q yinto endikufanele ndiyikopishe kwaye ndiyibambe q Andiyi kubona into eluhlaza kwiphepha eliphambili.
mmm, ndicinga ukuba ulungile, ndiya kuhlaziya itafile ngeendawo ezininzi zedatha
AMABHAYIBHILE AKUFANELE AKHE UBIGGER
Kungakuhle, ndiqinisekile ukuba ndiyaxolisa….
hayi, ngenxa ye-azimut kuya kufuneka ihlengahlengiswe kuba iibangele kufuneka ziphendule ngokulandelana kwendlela enye ngokubhekiselele ngasentla.
mhlawumbi enye yale mihla iya kutshintshwa kwiinjongo ezinjalo.
Ukubingelela kubo bonke, lo mfanekiso mhle ungasetyenziswa kunye nedatha kwi-azimuth ?????.
Ndiyenavice e-autocad, kuyonwaba ngokwenene indlela yokusebenzisa ezi zixhobo kuba zilula ixesha.
ngokubhekiselele kumzekelo we-traverse, xa udlula idatha ye-exel (@ ubude
Sawubona Prudy, ngaba uthetha ngale polygonal okanye enye?
kukho inxalenye encinci ehlala ivulekile, kwimeko yolu, ngeposti ebangela ukujikeleza kwemizuzwana, kwaye yiloo nto ndiyithethayo ngempazamo yokuvala
xa usebenza nomnye umzila, unokuba nephutha elikhulu lokuvala, okanye idilesi iyayigqubuthela, kwaye yimi ufumana ingcamango yokuba ulahlekile kwelinye icala
Prudy Fortuna uthi:
Xa ndakha i-polygonal ndihlala ndifuna ukunweba kokugqibela
UGo Diego, apho unesi template kunye nenkcazo yendlela eyenziwe ngayo kwaye isetyenziswe ngayo.
Ewe, andifumananga imacro esele ikho, kodwa inokwakhiwa nge-Excel ... izakundithatha ithutyana eholideyini kodwa ndicinga ukuba iya kuba ngumdla.
Ukuba abafana bahlamba echibini baze balele belele, mhlawumbi ndiya kunika emini.
Sawa Diego, ukubingelela kubantu baseParaguay.
Ewe, kukho iindlela ezininzi zokubala iinkomo. Qala ngokubala izimpondo nokuwahlula ngamabini, balala imilenze uze uyihlule ngamane, okanye ubale iinkomo ngokuthe ngqo.
Eyona nto ilula: kukusebenzisa i-AutoCAD Civil 3D okanye i-Softdesk kuba kufuneka uhambe kwindlela ekhe ifike kuyo, apho ungakhetha khona indawo yokuvela kwaye wenze ngokuzenzekelayo itafile.
Enye imeko ukukwenza ngokukhuphisana (Microstation), kunye nesicelo I-Visual Basic, njengoko kubonisiwe kule post.
Ukuba ufuna ukukwenza njengoko utshoyo, into kuphela ndiyibona yinkimbinkimbi kukuba kuthunyelwe idatha ukuba iphumelele kwaye ihambe kwindlela esifuna ngayo. Kodwa ndiphe ixesha elincinane lokubuyela endlwini yam, kuba namhlanje iqala iholide lePasika kule ndawo kwaye ndiyilingwe.
Diego D. uthi:
Kwakumnandi ukubulisa Don Alvarez, kumzuzwana odlulileyo sabafuna ababeze ngempazamo angafuni website yakho Ndiyifumene kakhulu umdla, bobabini ndabaleka ngendlela mnandi yokunxibelelana inzululwazi.
Ndingathanda ukubuza ukuba wazi ezinye script, okanye inxalenye Excel ukuba andincede ukwenza oku kulandelayo: mna idijithali e Cad buyimilo kunye eziphezulu iingongoma ngokucacileyo, kunye UTM abo ilungelelanise. Ndiyakwazi ukuzithumela ngokuthe ngqo kwi-txt ukuze ndifunde ngokugqwesileyo.
umbuzo wam: ukwazi idatha ye-UTM yamanqaku 1… N, ngaba kunokwenzeka ukufumana idatha yezitishi, iibheringi kunye nomgama?
Oko kukuthi, ukusuka kwidatha endikunikezelayo, inqaku loku-1 lino-X… Y…, nokwazi ukuba inqaku lesi-2 lino-X… Y…; NGABA UNGANDIXELELA UMGAMA OWAHLUKILEYO NENGAPHANDLE KWANYE? Ukulungiselela i-spreadsheet esihambelanayo ngokuzenzekelayo?
mbulela uthisha ukususela ngoku!
Eyona ndlela ivela kwiParaguay!
Indlela iWeododesk Design Team Works